Global Voices teny Malagasy · 16 Septambra 2017
16 Septambra 2017
Tantara tamin'ny 16 Septambra 2017
Tetikasa Milina Famantaran-teny Hamelona Indray Ny Teny Quechua
Amerika Latina16 Septambra 2017
Azonao saintsainina ve ireo solosaina, finday raitra sy roboto miteny Quechua? Miasa mba hanatanteraka izany ilay injeniera Peroviana.
Bilaogy Armeniana Miresaka Fidarabohan'ny Armavia
Azia Afovoany sy Kaokazy16 Septambra 2017
Nianjera tany amin'ny Ranomasina Mainty ny fiaramanidina Airbus A320 an'ny zotram-piaramanidina Armeniana Armavia ary mpandeha miisa 113 niaraka tamin'ny ekipan'ilay zotra no maty tamin'izany, izay azo lazaina ho fianjeran'ny fiaramanidina ratsy indrindra nisy teo amin'ny tantaran'i Armenia.
Manapariaka Ny Bilaogy Aty Afrika Amin'ny Alàlan'ny Onjampeo
Afrika Mainty16 Septambra 2017
Mety miahiahy angamba ny mpihaino sasany - "be pitsony loatra ny famahanana bilaogy ... aiza ny fahafahana hifandraisana, mbola lafo vidy ny aterineto, " izany no fanehoan-kevitry ny mpihaino iray - kanefa mampiseho ny fandaharan'ny Onjampeo BBC World Tambajotra Afrika fa zava-misy ary anisan'ny miroborobo ny famahanana bilaogy eto Afrika...
Fitaovana Teknolojika Natao Hitahirizana Ireo Teny Tandindonin-doza
Mediam-bahoaka16 Septambra 2017
Ny Ivontoerana ho an'ny fiteny tandindonin-doza, fikambanana iray ao Orégon, ao Etazonia, miasa mba hitady vahaolana mikasika ny fanjavonan'ireo fiteny vitsy an'isa sy ny famafàna ny sivilizasiona miaraka aminy. Mitondra ireo atrikasa siantifika ho fitehirizana ireo fiteny ary miankina amin'ireo teknolojia vaovao. Manao fanangonambola izy ireo mba hahafahana mamatsy fitaovana...
Zavo-tsetroka Ao Santiago
Tena lohasaha tsara tarehy i Santiago . Tena mahavariana ireo tendrombohitra. Izany hoe, raha hananao ny fahafahana mahita azy ireo .
Fomban-drazana Shileana Tsy Hay Hazavaina
Ity no andro voalohany ho anao ao amin'ny anjerimanontolo. Tsapanao any anatinao any ny fanantenana rehetra . Mahatsiaro ho mirehareha amin'ny maha-anao anao ianao satria nandalo ny fanadinam-pirenena, izay manome anao ny teboka ilainao mba hidirana any amin'ny oniversite. Vaovao avokoa ny zava-drehetra : ny endrika, ny toerana, ny fifampiresahana,...
Akom-baovao Tao Amin'ny Tontolon'ny Bilaogy Toniziana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana16 Septambra 2017
Nanoratra momba ny fahazoan'ny TECOM ao Dubai ny 35 % ny tsena amin'ny Telecom Tonizia, mpandraharaha mpanao ampihimamba ny telefonina tsy mihetsika (fixe) ao Tonizia izay voalaza fa mifehy ny 72% ny tsenan'ny finday ao amin'ny firenena ihany koa ny Mochekes (FR), MMM, Tom (FR), Kaaboura ary Adib (FR).